Skype 6.1.73.129 Final + နှင့် အသုံးပြုနည်း စာအုပ် | IT Sharing Network
Pyae Phyo (ပြည်)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ Skype 6.1.73.129 Final Offline Installer လေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်... Skype အသုံးပြုနည်း မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် စုကြည်ထွေး ရေးသားပြုစုထားတဲ့ Skype အသုံးပြုနည်း စာအုပ် အခန်းပေါင်း (၃၁) ခန်းပါဝင်ပြီး ၁။
မိတ်ဆက် ၂။ Skype ၏သမိုင်းကြောင်း ၃။ Skype ဆော့ဝဲလ်ကို အင်တာနက်မှ အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်း ၄။ Skype ဆော့ဝဲလ်ကို Install ပြုလုပ်နည်း ၅။ Skype အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း ၆။ Skype တွင် ပိုက်ဆံထည့်နည်း ၇။ Skype Profile ပြင်ဆင်ခြင်း ၈။ Skype Account ၏ Password ပြောင်းခြင်း ၉။ Skype တွင်ဘာသာစကားပြောင်းပြီး အသုံးပြုခြင်း ၁၀။ Skype အသုံးပြုရာတွင် သိထားသင့်သည့် နေရာများ ၁၁။ Testing Call နှင့် ဖုန်းစမ်းသပ်ခေါ်ဆိုခြင်း ၁၂၊ နိုင်ငံခြားဖုန်းနံပါတ်များကို တိုက်ရိုက်ခေါ်ပြီး စကားပြောခြင်း ၁၃။ ခေါ်ပြီးသားဖုန်း နံပါတ်များကို ပြန်ခေါ်ခြင်း ၁၄။ Phone Number ကို Contact List တွင်ပေါင်းထည့်ခြင်း ၁၅။ Contact Lists တွင် သူငယ်ချင်းများ ပေါင်းထည့်ခြင်း ၁၆။ Contact Lists တွင်ရှိသော သူများနှင့် စကားပြောခြင်း ၁၇။ Facebook (or) Mail မှ သူငယ်ချင်းများ ပေါင်းထည့်ခြင်း ၁၈။ ရုပ်ပါမြင်အောင် Video Call နှင့် အသုံးပြုခြင်း ၁၉။ Group ဖွဲ့ပြီး Video Call အသုံးပြုခြင်း ၂၀။ Group ဖွဲ့ပြီး Conference Call အသုံးပြုနည်း ၂၁။ SMS & Instant Messages ပေးပို့ခြင်း ၂၂။ privacy Setting ကို Control လုပ်ခြင်း ၂၃။ History ကို Mange လုပ်ခြင်း ၂၄။ Contact List မှ သူကို Block လုပ်ခြင်း ၂၅။ Block လုပ်ထားသူအား Unblock ပြန်လုပ်ခြင်း ၂၆။ Screen ကို Share လုပ်ခြင်း ၂၇။ Connestion Setting ချိန်ညှိခြင်း ၂၈။ Phone Call အတွက် အသံ Voice Setting ချိန်ညှိခြင်း ၂၉။ Video Call အတွက် ရုပ် Video Setting ချိန်ညှိခြင်း ၃၀။ Skype ကို Protable လုပ် အသုံးပြုခြင်း ၃၁။ Skype အသုံးပြုဖို့အတွက် Hardware လိုအပ်ချက် စသည်ဖြင့် ပြည့်စုံအောင် ရေးသားဖော်ပြထားထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်... Skype 6.1.73.129 Final Offline Installer ကိုတော့ Zippyshare, Box နှစ်နေရာတင်ပေးထားပါတယ်....
Skype 6.1.73.129 Final Zippyshare
Box >>> Download <<<
Skype အသုံးပြုနည်း Minus
Mdiafire >>> Download <<< Download ယူနည်းများ >>> ကြည့်ရန် <<<
ဒီ Post လေးက သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် FB Like လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ... Like လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့ FB ပေါ်မှာ Post လေးရောက်သွားမှာပါ....
နည်းပညာ၊ Software နှင့် နည်းပညာ စာအုပ်များ မျှဝေရာ....www.pyayblogger.comမှကြိုဆိုပါတယ်....
ပြည်သတင်း + ပေါက်ခေါင်းသတင်း + သစ်ထူးလွင် သတင်းဆိုက်သုံးခု သတင်းတွေကို Android ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ဖတ်နိုရင်န် (မိတ်ဆွေတစ်ချို့ ပြုလုပ်ခိုင်းသည့...
မင်္ဂလာပါ ခုဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလေးက chat box က အကိုတစ်ယောက်တောင်းထားလို့ Momo8,Mono9,Mono11 tablet များကို firmware ပြန်တင်နိုင်မဲ့နည်းလ...
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ facebook အကောင့်အသစ်ဖွင့်ရင် လော့ကျကျနေတယ်ပြောလို့ အဆင်ပြေနိုင်ဆုံးနည်းလမ်းလေးကို ပြန်...
https://m.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdb.tt%2FTszw8E7H&h=kAQGBXDD4&s=1 အားလုံးပဲကြိုက်​ကြမှာပာ ဒီ​ကောင်​​လေးကလန်းတယ်​ သုံး...
အသိပညာတိုးပွားစေမယ့် ဇာတ်ကားလေး တစ်ကားကို မိတ်ဆွေတို့ကို ကြည့်စေချင်လို့ Youtube မှာတင်ထားပါတယ်။ လက်ရှိကြည့်သူဦးရေ 1100 ကျော် Like အေ...
cdma အတွက် ခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ Root လုပ်ဖို့ အတွက် သူငယ်ချင်းအားလုံးကို MMSD ကနေပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။ ဒီ Tool လေး...
Audio CD သီချင်းတွေကို ကို ကွန်ပျူတာထဲသိမ်းတဲ့နည်းကို တစ်ချို့လူတွေက မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ Audio CD ကူတတ်သလားဆိုရင် မကူးတတ်တဲ့လူတွေအများကြီး...
Firefox မြန်ဆန်လာအောင်သုံချင်ရင် ... Your Firefox is working slowly? Boost Firefox inasingle click with SpeedyFox absolutely for free! ...
Earth HD Deluxe Edition v3.0.7 For Andriod (Update...
remove pattern lock for android
cFosSpeed.8.03.Build.2014.Beta + Trial ကို Restart...
Windows7Boot Speed Up အတွက် အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်း (...
Uniblue SpeedUpMyPC 2013 5.3.4.5 Final
Windows Loader 2.1.9 DAZ
ဖုန်းထဲမှာ movie နှစ်ခုကို ပြိုင်တူကြည့်ကြမယ်
Smart Tools v1.5 for Android
Air Navy Fighters For Android V.2.01
Modern Combat4Zero Hour v1.0.1 for Android
Internet Download Manager 6.14 Build5PORTABLE
Samsung Galaxy S Advance ကို 4.1.2 တင်မယ်
SubWay Surf ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးကို Coin ခိုးနည်း androi...
ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် offline အသံလေး နဲ့ နာလို့ရတယ်နော...
All Antivirus License 2013 Premium ( update13 Janu...
Desktop ပေါ်က Icon တွေမှာ Shortcut တွေ Arrow တွေမပေ...
Smart Card Knowledge နည်းပညာခရီးသည် - သန်းထိုက် (ေ...
English - Myanmar / Myanmar - English Dictionary P...
KeyMaker 2013 v1.0 Final For Dayli Updated All Key...
AVG V.3.0.3 (For Android)
အမြင့် ဖုန်းတွေနဲ့ တတ်ပလက် များကို apk ဖိုင်လေးနဲ့...
Android Phone များအတွက် Viber နောက်ဆုံးဗားရှင်းလေး...
Laptop ကို ကြာရှည်ခံပြီး လုံခြုံစိတ်ချစေရန် နည်းလမ...
Ulead Video Studio6(Video Editing သင်ခန်းစာ)
Network Problem (Wireless Network ပြဿနာများ)
Virus ကြောင့် Task Manager ၊ Regedit ၊ Folder Opti...
Kaspersky Daily Activation Keys 04 January 2013
Wifi Hacking Basic By 3thic0kiddi3 + WiFi Hacking ...
T8830pro,S3 clone,S2 clone,note clone,နဲ့ အမျိုးမျ...
Kaspersky Keys All version (31.12.2012) Not Block...
Angry Birds Star Wars v1.1.0 ( PC)
Ubuntu ထည့်သွင်းနည်း လမ်းညွှန်